ကနေဒါမှာမနက်တခါ၊ညနေတခါ၊ဘယ်သူလာလာကျွေးတဲ့ Food bank
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/06/20140အကြံပြုခြင်း
Asia Pacific World 2014 သရဖူရရှိခဲ့သည့်မေမြတ်နိုးသည် ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇွန်လ ၅ ရက်ည ၁၀ နာရီခွဲတွင် ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်း ဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
လူကြိုက်များတဲ့ ဆုလို့ ခေါ်တဲ့ အင်တာနက်က တဆင့် မဲပေးမှုတွေကြောင့် အမှတ်အများဆုံးနဲ့ ဆုရခဲ့သ လို နောက်ဆုံး အလှမယ် သရဖူကိုလည်း ဆွတ်ခူးခဲ့သူ မေမြတ်နိုးဟာ တောင်ကိုရီးယား သရုပ်ဆောင်များ အသင်းရဲ့ အထူး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်း ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ချီးမြှင့်ခံရသူပါ။
အဲဒီလက်မှတ်ဟာ တောင်ကိုရီးယားမှာ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်ခွင့်လည်း ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်ပြီး အလှသရဖူဆောင်းခဲ့သူ မေမြတ်နိုးဟာ နိုင်ငံဂုဏ် ကိုဆောင် ရင်း မိခင်နိုင်ငံကို ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပေါ် ခြိမ်းခြောက်နေမှုတွေကို အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်ဖို့ HRW လူ့အခွင့်ရေးစောင့် ကြည့်ရေးအဖွဲ့က ဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ မဲဆွယ်ပွဲတွေကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခြင်းမပြုပဲ လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်အောင် မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေ နဲ့ ဆောင်ရွက်ပါလို့လည်း နယူးယောက်အခြေစိုက် HRW အဖွဲ့ကပြော ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မေလ ၁၈ ရက်နေ့က မန္တလေးမှာပြောကြားခဲ့တဲ့ စကားတချို့ကို ကော်မရှင်က သတိပေးခဲ့တာနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး HRW ကအခုလိုကန့်ကွက်စာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်အေးဟာ စစ်တပ်ဘက်ကလိုက်ပြီး မှတ်ချက်ချပြောဆိုမှုတွေအမြောက်အများရှိကြောင်းလည်း HRW လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။
၂၉-၅-၂၀၁၄ ရက်နေ.က မန္တလေးမြို.၊ နန်းတော်အထူးကုဆေးရုံမှသူနာပြုတာဝန်
ထမ်းဆောင်နေသူ မန္တလေးသူနာပြုတက္ကသိုလ်ဒုနည်းပြဆရာမ ဒေါ်နန်းခိုင်ထက်
အား လူပုံအလယ်တွင် ရိုင်းပြစွာကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားမိသည့်အတွက်
မန္တလေးပြည်သူ.ဆေးရုံ( အစိုးရဆေးရုံ ) မှ လက်ထောက်ဆရာဝန် ဒေါက်တာစံပယ်ဝတ်မှုံ
က(၅-၆-၂၀၁၄) ရက်နေ.တွင်ကန်တော့ပွဲဖြင့် လာရောက်တောင်းပန်ခဲ့ရသော
ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမန္တလေးမြို.တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
သတင်းဓါတ်ပုံ- Aung Ha Ppy.
by Tawtaw Tawtaw
ဦးရွှေသန်း မေမြင့်တို့အကြောင်းလေး ပြောပါရစေ
သူနဲ့တွေ့ခွင့်ရချင်ရင် အဲခေတ်က ၅၀၀၀ကျပ်
လိုင်းကောင်းတက်ချင်ရင် ရေခဲသေတ္တာ တီဗွီ
မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်က အဲ့ခေတ်မှီသူ အရာရှိတွေမေးသာကြည့်ပါ
မေမြင့်ကတော့ မောင်နှမတွေအားလုံးရဲ့ အမွေပုံကို မောင်ပိုင်စီးခိုးထားလို့
သူအပိုင်စိးခဲ့တဲ့ထဲမှာ အေဒီထိပ်က အခုတိုင်းရင်းသားစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ခြံ
နောက်ဦးရဲထွဋ်ညီအရင်း ၀င်းထွဋ်ဦး ဆေးချတော့ခြံပါရောင်းရရော
နောက် ၀င်းထွဋ်ဦးက သူ့ယောက်ဖ အနီးကပ်ရဲ့သေနတ်ထင်တယ်
ခိုးပြီး အမှတ် ၃ လမ်းမပေါ်မှာ ဓားပြတိုက် ကားကို ပြည်ထောင်စုရိပ်သာထဲမှာသွားထိုး
သူ့ကို သွားခေါ်ပေးတဲ့ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြိးဟောင်းသားတစ်ယောက်တောင်ပါသေး
ပေါင်း၃ယောက် ထောင်ကျ မိသားစု အမွေဖြတ် ထောင်ထဲမှာသေ..
ညီမအရင်း ကလျာဆွေ .. ချိုပြုံးသားနဲ့နှစ်များစွာတွဲ
ဒွေးနဲ့တိတ်တိတ်ပုန်းညား ဒေါ်မြင့်လိုက်ပြောတော့ မိုးမိုးဆဲထုတ်လို့အရှက်ကွဲ
နှစ်ပေါင်းများစွာ ရာဘ ညိနေသည် ဆေးသမားစစ်စစ်
ယောက်ဖ ဗခကဟောင်းတင်ထွန်းသား ကံလှတင်ထွန်း ဆေးသမား
ယောက်ဖ ဦးဇေယျာအောင် ယခု MIC ဥက္ကဋ္ဌ
တစ်ဦး အရပ်သား တစ်ဦး အပတ်စဉ် ၄၀ မှ မှင်နီတားတပ်ထွက်
ဦးရဲထွဋ်ဇနီး TTC 90 ခု ကျောင်းသူ
ဦးရဲထွဋ် ၀မ်းကွဲ ညီအကိုအတော်များများ ဆေးနဲ့သေပြီ
အော်... မေမြင့်နဲ့ ဒေါ်ဘေဘီစောက ၀မ်းကွဲညီအမဆိုတော့ ဂဠုန်ကြီးရဲ့
မျိုးကောင်းရိုးကောင်း ၀ံဂျီးမင်းကို ဂုဏ်ပြုရင်းဒီပို့စ်ကိုတင်တယ်
၀ံဂျီးရေ မိသားစု ခိုးထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါတင်မယ်
Rebecca Wolsak of Interpares is hosting Dr. Cynthia Maung and five other colleagues from their Burma program to learn about the Canadian federal health system. They plan to be in Toronto on Saturday June 7th forafew hours in the evening before flying out of Toronto late at night. Rebecca contactedafew of us (short notice) as Dr. Cynthia and group would like to meet the community in Toronto. They are:
1. Dr. Cynthia Maung, Mae Tao Clinic, Director.
2. Nang Snow, Back Pack Health Worker Team, Deputy Director
3. Saw Nay Htoo, Burma Medical Association, Program Director
4. Nai Ley Ye Mon, Mon National Health Committee, Director
5. Gary Rozema, Burma Relief Centre, program coordinator
6. Crystal Maung, Mae Tao Clinic
We are arrangingalast minute effort for this gathering with Dr. Cynthia Maung and team.
Date & Time: Sat June 7th 7:30 PM
20 Wade Avenue
Meeting Hall, 3rd Floor
( Tamil Co-operative Homes Inc. right across Lansdowne subway station)
Tronto, ON M6H4H3